Top 10 Toerana miafina eto amin'izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 10 Toerana miafina eto amin'izao tontolo izao
(Last Nohavaozina: 26/05/2021)
Farihy ambanin'ny tany, riandrano miafina, lalana tsy voavono tanàna tsy fantatra, ary fomba fijery mahafinaritra, izao tontolo izao dia feno toerana miafina mahagaga. Ireo ambony ireo 10 ny toerana miafina eto amin'izao tontolo izao dia azon'ny mpandeha rehetra atao nefa matetika tsy hita. Noho izany, miomàna amin'ny dia mandroso saina any amin'ireo toerana miafina sy manaitra indrindra eto an-tany.
1. Toerana miafina ambony any Alemana: Berchtesgaden
250 km ny lalan'ny fitsangantsanganana, ranomasina turquoise madio, ary tampon-tampona mahafinaritra, Berchtesgaden National Park dia iray amin'ireo tanjona miafina any Alemana.
Ity valan-javaboary ity dia eo akaikin'ny sisin-tanin'i Alemana miaraka amin'i Aotrisy ary toerana misy ireo sary mahafinaritra indrindra ao Bavaria. Raha mitety ny Black Forest, Nanketo Alpes eto Soisa, na afovoan'i Eropa, tsy jerena ity park nasionaly mahatalanjona ity. Noho izany, mety ho iray amin'ireo mpandeha vitsivitsy ianao, hanao piknik by Lake Konigssee, andramo ny tampony amin'i Watzmann - at 2,713 metatra ho an'ny mahatalanjona ny fomba fijeriny ny lohasaha, ary ny natiora tsy voakitika.
Salzburg mankany Berchtesgaden miaraka amina lamasinina
Munich mankany Berchtesgaden miaraka amin'ny lamasinina
Linz mankany Berchtesgaden miaraka amina lamasinina
Innsbruck mankany Berchtesgaden miaraka amina lamasinina
2. Toerana miafina indrindra any Italia: Ny Monasiteran'i Santa Maria Dell Isola any Tropea
Ny ankamaroan'ny mpizahatany milentika masoandro amoron-dranomasina volamena any Tropea dia tsy mahalala ity toerana miafina ity. Na izany aza, eo ambonin'ny lohan'izy ireo mihitsy, mipetraka eo an-tampon'ny havoana feno vato, voahodidin'ny Ranomasina Tyrrhenian, dia ny fitoerana masin'i Santa Maria dell Isola.
Tsy mazava izany raha ny monasitera dia namboarin'ny Benozista na Basilianina tamin'ny vanim-potoana antenantenany. Noho izany, afaka mahita ny tantara sy ny hatsarana ao ambadiky ny endrika nohavaovan'ilay monastera ianao. Azo antoka fa, monasitera tafavoaka velona 2 horohoron-tany, azo antoka fa mitahiry ny sasany amin'ireo tsiambaratelo tsara indrindra sy mahaliana ao Calabria.
Vibo Marina mankany Tropea Miaraka lamasinina
Catanzaro hatrany Tropea miaraka amina lamasinina
Cosenza mankany Tropea miaraka amina lamasinina
Lamezia Terme mankany Tropea miaraka amina lamasinina
3. Ny toerana miafina indrindra any Suisse: Riandranon'i Trummelbach
Ao amin'ny lohasahan'ny 72 riandrano, mieritreritra ianao fa tsy misy tsy hita riandrano any Suisse, fa misy. Ny iray amin'ireo toerana miafina any Eropa dia ny Riandranon'i Trummelbach. Ity faritry ny 10 riandrano manome sakafo glacier any Suisse, dia omena rano miempo avy any Eiger sy Jungfrau.
Ary noho izany, rehefa mitsidika sy mandeha mamaky ny tendrombohitra, mankafy an'ireto riandrano miafina ireto, miakanjo akanjo izay hiaro anao amin'ny rano mangatsiaka mitete.
Lucerne mankany Lauterbrunnen miaraka amina lamasinina
Geneve mankany Lauterbrunnen miaraka amina lamasinina
4. Seegrotte Ao Hinterbruhl, Aotrisy
A sambo diany mankany amin'ny farihy ambanin'ny tany lehibe indrindra any Aotrisy dia traikefa tsy hay hadinoina. Ity lehibe mahita an'i Grotte ao amin'ny tanànan'i Hinterbruhl ity, dia rafitry ny lava-bato, tany am-boalohany namboarin'olombelona ho an'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, tamin'ny Ady Lehibe Faharoa.
Na izany aza, nilaozana ny farihy ambanin'ny tany tamin'izany. ankehitriny, ny Seegrotte any Hinterbruhl, niova ho iray amin'ireo tampony 10 toerana miafina hitsidihana an'izao tontolo izao.
5. Toerana miafina ambony any Sina: Tendrombohitra Sanqing
3 mamintina eny amin'ny rahona, Mount Sanqing dia iray amin'ireo masina indrindra amin'ny kolotsaina sinoa. Ny fahitana ny tendrombohitra Sanqing dia tsy iray amin'ireo fomba fijery manaitra indrindra amin'ny tontolon'ny sinoa, fa koa misy heviny masina amin'ny finoana Taoista; ny 3 ny fihaonambe dia maneho ny 3 Ireo madio, ireo andriamanitra avo indrindra.
Ny faritra manodidina an'i Sanqing koa dia manome fomba fijery mahavariana, lalana, ary teboka majika hahitana avy amin'ny 10 ankamaroan'ny toerana mahafinaritra any an-toerana. Ary noho izany, mamandriha dia mitsangatsangana 2 andro any an-tendrombohitra Sanqing, hahafahanao mankafy sy mijery tanteraka ireo toerana miafina rehetra.
6. Toerana miafina any Italia: Trentino
Ny hakanton'ireo Alpes italiana dia tsy ny tsiambaratelo nafenina tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Fantatry ny rehetra ny tandavan-tendrombohitra, tontolo, farihy alpine, sy kijana mahafinaritra. Na izany aza, Trentino any avaratra atsinanan'i Italia, eo anelanelan'ny farihy Garda sy ny Dolomites, matetika dia tsy hita amin'ny lalana mankany fahagagana voajanahary voalaza eto. Eto ianao dia hahita isan'ny miavaka amin'ny 297 farihy hahitana.
Ankoatry ny, eto ihany no ahafahanao mankafy ny effet jiro manokana "alpenglow" amin'ny tampon'ny Dolomites, amin'ny filentehan'ny masoandro.
Florence ho any Milan miaraka amina lamasinina
Milan mankany Florence miaraka amina lamasinina
Venise mankany Milan miaraka amin'ny lamasinina
7. Toerana miafina ambony any Polonina: Ilay ala mikitroka any Szczecin
Namboly tamin'ny taona 30 ', Ny ala Szczecin dia iray amin'ireo toerana miafina indrindra eran'izao tontolo izao. Izany dia noho ny antony nametrahana ny ala any Polonina, akaikin'ny tanàna Gryfino. Avy amin'ny 400 hazo kesika nambolena tamin'ny taona 30 tany ho any, anio dia ho hitanao fa vitsivitsy sisa, mbola manao fitsidihana tanteraka ity toerana ity.
Ny antony mahatonga ny endrika tsy manam-paharoa dia mistery mandraka androany; maro no nanandrana namantatra raha noforonin'olombelona io na zava-mahatalanjona amin'ny natiora. Noho izany, raha manapa-kevitra ny hitsidika ianao, azonao atao ny mijery ny tsiambaratelon'ny hazo kesika’ kesika tsy manam-paharoa endrika, ary hijery ny iray amin'ny ny ala tsara tarehy indrindra any Eropa.
8. Toerana miafina tampony any Hongria: Tapolca
Tapolca dia tanàna kely mahafinaritra any Hongria, miorina akaikin'ny Uplands Baltan tahiry voajanahary. Ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mandeha any Hongria hanao vakansy any Budapest, fa ny tanànan'i Tapolca no tsiambaratelo voatahiry tsara indrindra any Hongria. Ho fanampin'ny akaiky azy amin'ny valan-javaboary lehibe, ny tanàna dia misy farihy eo afovoany, miaraka amin'ny kianja mahafinaritra sy ny kafe manodidina.
Noho izany, raha te hanandrana nahandro hongroà ianao, mankafy sy mahita ny toetra mahavariana an'i Hongria, ary zohy farihy, avy eo amandriho ny tapakilanao mankany Tapolca.
Vienna mankany Budapest miaraka amina lamasinina
Prague mankany Budapest miaraka amina lamasinina
Munich mankany Budapest miaraka amina lamasinina
Graz mankany Budapest miaraka amina lamasinina
9. Toerana miafina ambony any Angletera: Hunstanton, Norfolk
Rehefa mitsidika ny tanànan'i Hunstanton any Norfolk ianao, dia ho toy ny tanàna fialan-tsasatra mangina amoron-dranomasina. Na izany aza, rehefa avy midina mankeny amoron-dranomasina sy amoron-dranomasina misy vatokely ianao, ho hitanao ny hantsana mahavariana indrindra. Ny hantsam-bato Hunstanton taloha dia sosona vatom-bato maro loko; vato sandoka mihosin-tany, vatosokay mena nasiana tsaoka, voahodidin'ny ahidrano maitso sy ranomasina manga.
Ary noho izany, ny morontsiraka Hunstanton tsara tarehy dia mahatalanjona tokoa, indrindra amin'ny filentehan'ny masoandro. Amin'izao andro antoandro izao, miova loko ny hantsam-bato, ny mampiavaka ny ranomasina sy ny hantsana aza vao mainka mampiavaka azy. Na eo aza ny hatsarany voajanahary, tsy betsaka no mahalala an'io toerana miafina any East England io. Noho izany, aleo maika hamandrika ny tapakilan'ny fiarandalambinao mankany amin'ny torapasika any Hunstanton ianao, alohan'ny hahalalan'izao tontolo izao.
Amsterdam mankany London miaraka amina lamasinina
10. Saikinosy Applecross Ao Ekosy
Io fahagagana Scottish io dia natao tamin'ny alàlan'ny lalana ihany 1975, miaraka amin'ny lalana mihodina sy mideza mamaky ny saikinosy amoron-dranomasina. Noho izany, raha te hitsidika an'io vatosoa lavitra io ianao, tsy maintsy niankina tamin'ny dia an-tsambo irery ianao, toy ny sisa amin'ireo mponina eto amin'ny nosy.
Applecross dia tanàna kely tsara tarehy eo amoron'ny morontsirak'i Ekosy. Trano kely kely sy trano kely miely amin'ny havoana maitso mando, mitazana ny ranomasina, halainao ny fofonainao.
Miaraka ihany 544 mponina, vitsy dia vitsy ny antony fitsangatsanganana any Applecross, fa ny fomba fijery mazava sy mahafinaritra, mahazo azy io ho toerana iray amin'ny tampony 10 toerana miafina eto amin'izao tontolo izao. Ankoatry ny, Camusterrach sy Ard-dhubh dia toerana roa hafa tsy tokony hadino amin'ny fikarohana nataonao, satria zara raha voakitika maoderina koa izy ireo.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina fitsangatsanganana tsy hay hadinoina any an-tampony 10 ankamaroan'ny toerana miafina eto amin'izao tontolo izao amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay hoe “Top” ve ianao? 10 Toerana miafina eto amin'izao tontolo izao ”ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fsecret-places-world%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ru ny / en na / de kokoa fiteny.
HiddenDestinations HiddenGems miafina SecretPlaces TopSecretplacesinEurope
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe